Isifanekiso sikaTrump sibekwe endlini yokugcina izimpahla ngoba abantu abayeki ukusishaya | Scrolla Izindaba
Isifanekiso sikaTrump sibekwe endlini yokugcina izimpahla ngoba abantu abayeki ukusishaya
Kudingeke ukuthi kususwe isifanekiso sikaDonald Trump endaweni yesigcinamagugu sase-Texas, eMelika, ngoba izivakashi bezingayeki ukusihlasela.
Abezindaba i-San Antonio Express babike ukuthi abanikazi besigcinamagugu i-Louis Tussaud’s Waxworks baphoqeleke ukuthi bathuthele isifanekiso sikaDonald egumbini labo lokugcina izimpahla, ngoba abantu bebesishaya futhi besilimaza ikakhulukazi esiswini.
“UClay Stewart, umphathi wesigcinamagugu esfundazweni, utshele abezindaba ukuthi imvamisa kujwayeleke ukuthi kuhlaselwe izithombe zosopolitiki.”
Uthe bazama ukuvimbela ukuhlaselwa kwalesi sithombe ngokusisusa lapho besikhona, ukuze ezokuphepha zikwazi ukusibheka. Kodwa-ke, lokho akuzange kuzivimbe izivakashi ukuthi “zishaye” isithombe sikaDonald ngezibhakela ebusweni.
Ngakho-ke basithuthele egumbini lokugcina izimpahla, lapho esengamele khona njengamanje.
“Besihlale siba nezinkinga ngezifanekiso zomengameli abahlukene ikakhulukazi izifanekiso zikaBush, u-Obama kanye no-Trump – zonke zibalwa kulezo ezake zahlaselwa ngabantu phambilini. Izindlebe zesifanekiso sika-Obama sezidatshulwe amahlandla ayisithupha. Ngemuva kwalokho kwahlaselwa ikhala lesifanekiso sikaBush.”
Selokhu ashiya esikhundleni u-Obama, isifanekiso sakhe sesithole ukuphumula futhi siyaqhubeka nokukhonjiswa kubantu njengoba kubikwa ukuthi akusavamile ukuthi sihlaselwe.
Isifanekiso sika-Obama sibekwe eduze nalapho okususwe khona esikaTrump, okusho ukuthi sibona yonke indawo yase-San Antonio.
Akusikhona okokuqala ukuthi isifanekiso sikaTrump sibe nezinkinga zokuhlaselwa. NgoMfumfu nyakenye, isigcinamagugu i-Madame Tussauds Berlin yasusa isifanekiso sikaTrump, sasilahla endaweni kadoti njengendlela yokuqeda konke okwakuphethwe nguye.
Ngisho namalungu obukhosi bakhe awaphephile; njengoba kudingeke ukuthi kususwe isifanekiso sowesifazane owayengunkosikazi wakhe wokuqala, uMelania Trump endaweni yangakubo e-Slovenia ngemuva kokushiswa ngomlilo ngabacekeli bomhlaba.
Umthombo wesithombe: @DearAuntCrabby